Who were Bengali, so called Rohingya?: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းနှင့် ဘင်္ဂလီခေါ်တောများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းနှင့် ဘင်္ဂလီခေါ်တောများ
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း
“ လူတိုင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာ စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် အခွင့်အရေးအားလုံး၊ လွတ်လပ်ခွင့် အားလုံးတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ လူမျိုးနွယ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အသားအရောင်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျား၊ မ
သဘာဝ အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဘာသာစားအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မျိုးနွယ်စုသည့် ဘာသာ အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးယူဆချက် သို့တည်းမဟုတ် အခြား ယူဆချက် အား ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သော သို့တည်းမဟုတ် လူနေမှု အဆင့်အတန်းနှင့် ဆိုင်သော ဇစ်မြစ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ဂုဏ် အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အခြားအဆင့်အတန်း အားဖြင့်ဖြစ်စေ ခွဲခြားခြင်းမရှိစေရ။
ထို့ပြင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် နေထိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ သို့တည်းမဟုတ် နယ်မြေဒေသ ၏ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ စီရင်ပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ တိုင်းပြည် အချင်းချင်း ဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ အဆင့်အတန်းတစ်ခုခုကို အခြေပြု၍ သော် လည်းကောင်း၊ ဒေသ နယ်မြေတစ်ခုသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်သည့် နယ်မြေ သို့တည်းမဟုတ်ကုလသမဂ္ဂမှထိန်းသိမ်စောင့်ရှောက် ထား ရသည့်နယ်မြေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတို့ ကို တစိတ်တဒေသလောက်သာ ရရှိသည့်နယ်မြေ စသည်ဖြင့် ယင်းသို့သော နယ်မြေများဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည် ဟူသော အကြောင်းကို အထောက်အထား ပြု၍သော်လည်းကောင်း ခွဲခြားခြင်း လုံးဝ မရှိစေရ”။
ဒါ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း က ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ အဓိက အော်နေတဲ့ အချက်ပါ။ ဒီအတိုင်း သာဆို ကျွန်တော်တို့ မှာ သူတို့ကို ဒီတိုင်းလက်ခံရမယ် အနေအထားပါ၊
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ကြေငြာစာတမ်း ရဲ့  …….
“ (၂) မိမိ၏အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကိုသုံးစွဲရာတွင် လူတိုင်းသည်အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုအသိအမှတ်ပြု၍ ရိူသေလေးစားရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေ စီကျင့်သုံးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကိုယ်ကျင့်တရား အပြင် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရေးတို့အတွက် တရားမျှတစွာ ကျင့်ဆောင်ရန်အလို့ငှာ လည်းကောင်း ဥပဒေပြဌာန်းထားသည့် ချုပ်ချယ်မှုများ ဖြင့်သာ ကန့်သတ်ခြင်းခံရမည်”။
ဆိုပြီး ထပ်ရှင်းထားပြန်တယ်၊ ဒီတာ့ ကျွန်တော်တို့ က သူတို့ လူ့အခွင့်အရေးကို ထိပါး တာ မဟုတ် ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကို ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်နေတာပါ၊ သူတို့ က သာ ကျွန်တော် တို့ အခွင့်အရေးကို လာနှောက်ယှက်နေတာပါ။
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်း ပိုပြီး ရှင်းအောင် ရှင်းဖို့ လိုလာပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း အပိုဒ် ၂ အရ ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ နိူင်ငံအသီးသီးမှာ လူဝင်မူ ဥပဒေတွေ ထားစရာတောင် မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ထားနေရသလဲ ဆိုပြီး မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ ခပ်တိုတို ပဲ ဖြေရမယ်ဆိုရင် လိုအပ်လို့ ရှိလာတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း ဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူတွေ အတွက် အကိုက်ညီဆုံး ဖြစ်စေမယ့် စံတွေ နဲ့ ရေးထားတာပါ။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ နိူင်ငံတွေက constitution (ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ) နဲ့ ညှိပြီး မိမိ နိူင်ငံ အလိုက် သင့်တော့်မယ့် ဥပဒေတွေ ကို ချထားကြရပါတယ်၊ အဲ့ဒီလို လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ချပေးထားပါတယ်။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း ရဲ့  အပိုဒ် ၈
" ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသော်လည်းကောင်၊ အခြားဥပဒေသော်လည်းကောင်း လူတိုင်း အတွက် ပေးထားသည့် အခြေခံအခွင့်အရေးများသည် ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရ လျှင် ထိုသို့ ချိုးဖောက် ဖျက်ဆီးသောပြုလုပ်မှု ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာ သော နစ်နာချက်အတွက် ထိုသူသည် နိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် တရားရုံးတွင် ထိ ရောက်စွာသက်သာခွင့် ရစေရမည်" ဆိုပြီး ဖော်ပြထာတာကိုကြည့်ရင် နားလည်နိူင်ပါတယ်။
ဒီလိုမှ အဟုတ်ရင် လူတွေ အကုန်လုံးက အကောင်းဆုံးနိူင်ငံတွေ မှာ ပဲ စုပြုံ ရောက်ရှိသွားကြပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ တစ်နိူင်ငံ နဲ့ တနိူင်ငံ ကြားမှာ နယ်ခြားစည်းတွေ သတ်မှတ်ကြတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး အရမလို အပ်ပေမယ့် နိူင်ငံတ တခု ရဲ့  အမိမြေ လုံခြုံ ရေး (Homeland Security) အတွက် မရှိမဖြစ် လုိုအပ်လို့ လုပ်နေကြရတာပါ။
ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ က လူ့အခွင့်အရေး ဆိုပြီး ရောချ လို့ ရတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် အမိမြေ လုံခြုံရေး (Homeland Security) ပါ။ ဘာကြောင့် အမိမြေ လုံခြုံရေး ကို နိူင်ငံတိုင်း က အရေးပေးရ သလဲ ဆိုရင် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား National Interest အတွက် ဆိုတာကို နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာပြည်ကို ခိုးဝင်လာခြင်း ကို မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး ကန့်ကွက်နေကြတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ကို မလေးစားလို့ မဟုတ်ပဲ တမျိုးသားလုံး အကျိုးစီးပွား အတွက် ဆိုတာ အားလုံး လက်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာ မှာ ဒီဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ တွေ က ဘာကြောင့် မြန်မာပြည်ထဲကို ခိုးဝင်လာရသလဲ၊ မင်းတို့ နိူင်ငံ က ဒီလောက် စုတ်ပျက်နေတာလို့ သူတို့ ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေ က မေးလာကြပါတယ်။ အမေးရှိလို့ ဖြေပါမယ်၊ ဒီ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့  ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိူင်ငံမှာ-
(၁) လူနည်းစု လူမျိုးတမျိုး ဖြစ်ခြင်း
(၂) လူနည်းစု ဖြစ်သည့် အပြင် နိမ့်ချ ဆက်ဆံ ခံရခြင်း
(၃) မြို့  တော် ဒါကား တွင် သုံးသော စကား အား ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာများ ကောင်းစွာမတက်ခြင်း
(၄) လူဦးရေ တိုးပွားနူန်း များပြာ ကာ လူနေ ထူထပ်ခြင်း၊
(၅)စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်း ၍ အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း၊
ဆိုတဲ့ အချက်တွေ အပြင် တဘက်နိူင်ငံဖြစ်သော မြန်မာပြည် ၏ နယ်စပ်မြို့ မောင်တော နှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့များတွင် ၄င်းတို့ ထက်အရင် ရောက်နှင့် နေထိုင်နေကြသော အဆွေတော် ဘင်္ဂလီများ စီးပွားရေး ပြေလည်နေခြင်း ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ကြောင့် ခိုးဝင်ပြီး လာရောက်နေထိုင်နေကြတာပါ။ ပြီးတော့ တချို့သော ဘင်္ဂလီ အများစုဟာ UN က ဒုက္ခသည် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံရ၍ တတိယ နိူင်ငံတခု သို့ သွားရောက်ခွင့် ရရေး အတွက် ဒုက္ခသည် စခန်းများမှာ ရိုဟင်ဂျာ အမည် ခံပြီး နေထိုင်ကြခြင်း ဖြင့် တတိယ နိူင်ငံသို့ မသွားရသည့်တိုင် UN မှ ပေးသော ထောက်ပံကြေး များကို အလုပ်လုပ်စရာ မလိုပဲ အချောင်ရနေသောကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖြစ် ခံယူနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် စကားစပ်၍ လူ့အခွင့်အရေး ဟုကြွေးကြော်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မီဒီယာများ အား သတိပေးလိုသည်မှာ မိမိ ပြောသော လူ့အခွင့်အရေးသည် မည်မျှ မှန်ကန်သနည်း ဆိုသော မေးခွန်းနှင့် လူ့အခွင့် အရေး အား အကြောင်းပြ၍ အမိမြေလုံခြုံရေး ( Homeland Security) ၊ နှင့် အမျိုးသား လုံခြုံရေး (National Security) ကို ထိခိုက်လာလျှင် မည်သည့် ပြည်သူမျှ လက်ပိုက်ကြည့်နေမည် မဟုတ်ပဲ ပြည်သူ တရပ်လုံး ၏ အကျိုးစီပွား အား ဖျတ်စီးသူ အဖြစ် တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိ ပေးအပ်ပါသည်။
by Zaw Z Tun
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 1:36 PM